Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Tabaraha Juventus Oo Cadeeyay Rabitaanka Paul Pogba, Saul Niguez Oo Liverpool Ku Wajahan Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Kala iibsiga: Tabaraha Juventus oo Cadeeyay Rabitaanka Paul Pogba, Saul Niguez oo Liverpool ku wajahan iyo Qodobo kale
July 4, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Paris St-Germain ayaa qandaraas u soo bandhigtay 34 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Argentina Lionel Messi kaasoo ah wakiil xor ah ka dib markii heshiiskiisa Barcelona uu dhacay. Si kastaba ha noqotee, kooxda ka dhisan La Liga ayaa weli ku rajo weyn inay qandaraaska u cusbooneysiiso xidiga lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or. (AS)
Manchester United ayaa dooneysa inay u ogolaato Donny van de Beek inuu ka tago kooxda xagaagan iyadoo ay xiiseyneyso Real Madrid , oo dooneysa inay amaah ku qaadato 24 jirka reer Holland. (Dailystar)
U dhaqaaqista Van de Beek ayaa wadada u xaari karta in United ay lasoo saxiixato daafaca dhexe ee Real Madrid iyo kooxda Real Madrid Raphael Varane. (Sun)
Liverpool ayaa miisaameysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez, oo 26 jir ah, iyadoo ciyaaryahanka reer Spain uu doonayo inuu ka ciyaaro Premier League. (Sportwiness)
Liverpool ayaa sidoo kale xiiseyneysa Lille iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Renato Sanches, oo 23 jir ah, laakiin waxa ay tartan kala kulmi kartaa Arsenal haddii ay baacsato laacibkii hore ee Bayern Munich . (Onzemodial)
Arsenal ayaa diyaar u ah inay ka fiirsato u dhaqaaqista West Brom iyo goolhayaha reer England Sam Johnstone, oo 28 jir ah, hadii aan la burburin karin heshiiska Sheffield United ee Aaron Ramsdale, oo 23 jir ah. (Dailystar)
Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa ku wargaliyay kooxda rabitaankiisa ah in ay dib ula soo saxiixdaan Paul Pogba oo ka tirsan kooxda Man United . 28 jirkaan reer France, oo qandaraaskiisa Old Trafford ayaa dhacaya sanadka 2022, wuxuu kula guuleystay labo horyaal oo Serie A ah Juve intii lagu guda jiray shaqadii ugu horeysay ee tababare Allegri. (90min)
Milan ayaa loo soo bandhigay xidiga Brazil Weeraryahanka Philippe Coutinho kuwaas oo dooneysa inay mushaharka xidigan ay liiska ka saaraan. (Mundo Deportivo)
Xiddiga qadka dhexe ee reer Norway Martin Odegaard, oo 22 jir ah, ayaa xaqiijiyay inuu ku laabanayo Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii uu amaah kula qaatay London kooxda Arsenal . (Football.london)
Bayer Leverkusen iyo weeraryahanka Czech Republic Patrik Schick, oo u ciyaaray xulkiisa Euro 2020, ayaa xiiso ka helaya AC Milan . (Tuttomercatoweb)
Inter Milan ayaa wadahadal la furtay wakiilka Denzel Dumfries iyadoo rajeyneysa inay soo gabagabeyso heshiiska 25 jirka PSV Eindhoven iyo daafaca garabka ee Netherlands. (Calciomercato)
Tottenham ayaa weli xiiseyneysa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic, 21, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia ayaa diirada saaraya inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo kooxda ka ciyaarta Serie A ka dib markii uu dhaliyay 21 gool 37 kulan oo uu saftay horyaalka 2020-21. (Sport Witness)
Xiddiga khadka dhexe ee reer France ee Arsenal Matteo Guendouzi, oo 22 jir ah, ayaa ku sii dhawaanaya ku biirista kooxda Marseille iyada oo kooxda Ligue 1 sidoo kale la filayo in ay dhamaystirto heshiiska daafaca Gunners William Saliba oo 20 jir ah (Goal)
Maamulaha Sheffield United Slavisa Jokanovic ayaa sheegay inuu isku dayi doono inuu ku qanciyo 23 jirka qadka dhexe ee reer Norway Sander Berge, oo lala xiriirinayo Arsenal inuu la joogo kooxda. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Toni Kroos, oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga ka dib Euro 2020, ayaa sheegay inuu rajeynayo inuu mustaqbalkiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo Real Madrid. 31 jirkaan ayaa qandaraaska uu haatan kula joogo kooxda reer Spain wuxuu dhacayaa ilaa 2023. (Marca)